Ahoana no ahafahako mamela ny Android Developer Options, USB Debugging, ary OEM Unlock? | la-manette.com
3 février 2021 feh JEAN-MICHEL CAPPIN
Ny torolalanao amin'ny fampandehanana ny safidy developer Android.
Ny safidin'ny mpamorona Android dia tsy ny kapoakan'ny rehetra satria nanapa-kevitra ny hanafina azy ireo i Google manomboka amin'ny Android 4 Jellybean. Saingy efa lasa lavitra ny rafitra fiasan'ny Android nanomboka teo ary azonao atao mora foana ny safidy Developer. Ankoatr'izay, ireo mpampiasa Android mavitrika vitsivitsy dia 2,5 lavitrisa izao tontolo izao.
Mazava ho azy fa nitombo ny isan'ny olona te hanova ny Android. Koa satria ireo torolalana Android hafa rehetra ao amin'ny Internet, ary na dia ny maro amintsika aza, dia angataho ny mpampiasa hanidy ny fomba fampivoarana Android ary hampiditra USB debugging, ary mety hamoha OEM; Mampihomehy, ity misy torolàlana Android iray hafa hanaovana izany.
Ahoana no ahafahako mamela ny Safidy Mpamorona, ny USB Debugging, ary ny OEM Unlock?
Raha sendra teny toy ny "debug USB" na "OEM unlock" ianao, dia izao no fotoana hampavitrika ny safidin'ny mpamorona ho an'ny fitaovana Android anao.
Ireo dingana voalaza etsy ambany dia mahazatra ho an'ny fitaovana Android rehetra mandeha amin'ny Android Stock [Pixel Launcher, ary Android One]. Ho an'ny fitaovana mandeha amin'ny dikan-teny Android [MIUI, EMUI, ONEUI, sns.], dia mety tsy hitovy ny dingana etsy ambany.
Ity ny fomba hidirana amin'ny Android Developer Options:
Sokafy ny Settings
Tap System - Momba ny finday
Midira midina ary tadiavo ny Build Number
Tsindrio ny safidy Build Number in-dimy na impito. Isaky ny manindry azy ianao dia hisy varavarankely mipoitra hiseho: “Imbetsaka ianao no [X] ho mpamorona”.
Rehefa avy nanindry fotoana ampy ianao dia hahita hafatra, "Ianao dia mpamorona".
Miverena any amin'ny sehatra Android lehibe.
Mandehana midina ary tsindrio ny safidy System.
Tsindrio ny Advanced. Ho hitanao izao ny safidy developer
Rehefa eo ambanin'ny Settings Developer ianao dia misy zavatra maro azonao atao. Mazava ho azy fa misy USB debugger sy OEM unlocker, saingy misy safidy lehibe maromaro ho an'ny mpamorona fampiharana izay nolazaiko taminao tamin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
Ny fampandehanana ny maody debugging USB dia ahafahan'ny rafitra mifandray amin'ny fitaovana Android. Ao anatin'ny toe-javatra mahazatra, ny mpampiasa dia afaka mampiasa ny fifandraisana USB mba hamenoana ny fitaovana sy handefasana rakitra.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fijerena ny sarimihetsika Transformers amin'ny filaharana?
Rehefa alefa ny USB debugging, ny mpampiasa dia afaka mandefa baikon'ny rafitra amin'ny fitaovana Android mba hanatanterahana ny asa amin'ny ambaratongan'ny developer, toy ny fandrefesana ny fitaovana, fametrahana patch isan-karazany, fampiharana Android an'ny antoko fahatelo, sns.
Ity ny fomba ahafahan'ny USB debugging amin'ny safidy developer Android.
Alefaso ny Settings Developer amin'ny Android
Mandehana midina mankany amin'ny fizarana "Debugging".
Alefaso ny debugging USB
Avelao ny USB debugging amin'ny fanindriana ny "OK".
Mandeha ny OEM unlock alohan'ny hanokafana ny bootloader. Ny mpanamboatra finday Android dia mitazona ny fisokafan'ny OEM miafina ao amin'ny safidin'ny mpamorona satria tsy mila ireo fanovana ireo ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Ity ny fomba ahafahan'ny OEM mamoha amin'ny firafitry ny developer Android.
Ampidiro ny safidy developer amin'ny Android
Tsindrio ny "Activate" raha te hampavitrika ny fanokafana OEM.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny fizotran'ny famoahana bootloaders dia miovaova arakaraka ny mpanamboatra fitaovana. Ohatra, ny fitaovana Xiaomi dia tsy manana bokotra fanokafana OEM, fa toerana iray antsoina hoe "Mi Unlock".
Ahoana ny fomba hamonoana ny safidy developer amin'ny Android?
Raha averinao amin'ny fandrindrana mahazatra azy ny Safidin'ny Mpamorona, dia tsy ilaina ny mamono azy ireo raha tsy manelingelina ny lafiny maha-perfectionist anao ny kiheba Developer Settings.
Raha izany no izy, ny fanipihana fotsiny ny Developer Options dia hanjavona amin'ny firafitry ny Android ny tabilao. Ireo mpampiasa izay tsy manafina ny safidy Developer dia afaka manaraka ity fomba manaraka ity: -
Mandehana any amin'ny Android Settings
Mandehana midina mankany amin'ny Apps sy Notification
Tsindrio ny menio App Info
Tadiavo ny app Settings ary tsindrio eo
Tsindrio ny Storage sy Cache
Tsindrio izao Clear Storage. Izany dia hanaisotra ny safidin'ny mpamorona amin'ny fanovana.
Izany dia manamarika ny fiafaran'ny fizotry ny fanafoanana ny safidy developer.
Antony 5 ambony indrindra ahafahana mampandeha ny safidy Developer
Na dia maro aza ny firafitry ny developer azonao ovaina, ireto ny sasany amin'ireo antony ambony indrindra ahafahan'ny safidy Developer amin'ny fitaovana Android anao:
1. Mamaha ny bootloader, mametraka ny famerenana amin'ny laoniny sy ny ROM mahazatra.
Ny antony mahazatra indrindra hanodinan'ny olona ny Safidin'ny Mpamorona dia ny mamela ny fika "Avelao ny OEM Unlock". Azonao atao ny mamela azy ho afaka manokatra ny bootloader Android anao mba hametrahana famerenana amin'ny laoniny. Raha vantany vao voahidy ianao ary napetraka ny fomba fanarenana mahazatra, dia tsy misy farany ny fahafaha-manao (raha toa ka manana sehatra fampivoarana mahazatra mahazatra ny fitaovanao). Azonao atao ny manomboka mametraka custom ROMs, custom kernels, ary Mods indray mandeha.
Vakio ihany koa: Ahoana ny filalaovana Call Of Duty Mobile miaraka amin'ny controller PS4 na Xbox
2. Manafaingana ny sary mihetsika amin'ny fitaovana
Safidin'ny mpamorona ao amin'ny trano fonenan'ny Android isan-karazany ny toe-javatra animation. Azonao atao ny manova ny mari-pamantarana animation fikandrana, ny mari-pamantarana fampihetsiketsehana, ary ny haavon'ny faharetan'ny animator. Amin'ny fanovana ny soatoavin'ny mari-pamantarana respectove, azonao atao ny manova ny hafainganam-pandehan'ny fitaovanao.
Ny firafitry ny animation fikandrana dia mifehy ny haingan'ny fanokafana na fanakatonana ny fampiharanao avy amin'ny mpandefa. Toy izany koa, ny sarimiaina tetezamita dia mifehy ny halavan'ny hetsika. Azonao atao ny mampidina ireo soatoavina ireo mba hanafohezana ny faharetan'ny animation ary hampitombo ny hafainganam-pandeha hanafainganana ny Android anao.
3. Ataovy tahaka ny toerana misy ny fitaovanao
Ny maody mpandrindra an'ny Android dia manana fika antsoina hoe “Fampiharana toerana fanesoana” izay ahafahanao mampiasa rindranasa an'ny antoko fahatelo hanahaka ny toerana misy ny fitaovanao. Azonao atao ny manitsy ny fampiharana an'ny antoko fahatelo rehefa mandeha ity kira ity mba hampahafantarana ny olona fa any an-kafa ianao.
4. Ampitomboy ny fahombiazan'ny lalao
Raha manana finday avo lenta ianao dia azonao atao ny mampitombo ny herin'ny fanodinana ny GPU an'ny findainao mba hahazoanao tosika kely amin'ny filalaovana. Mba hanaovana izany, ampidiro ny safidy "Force 4x MSAA" (anti-aliasing multi-sampling).
Ampiasao amim-pitandremana anefa ity toe-javatra ity satria hampiasa loharano bebe kokoa ny findainao Android. Vokatr'izany dia ho reraka koa ny batterieo. Ny fampisehoana tsara indrindra sy ny sary malefaka dia handany haingana ny bateria.
5. Fanesorana ny tatitra momba ny bibikely
Andeha hatao hoe amin'ny ROM mahazatra ianao ary misy bibikely ny rafitra fandidiana. Afaka mitsidika mora foana ny safidin'ny mpamorona ianao ary mampiasa ny safidy "Raiso ny tatitra momba ny bug". Io safidy io dia hampiseho ny fichier logiciel an'ny fitaovanao mba hozarainao sy hojerenao.
Ny safidy voalaza etsy ambony dia ilaina amin'ny fakana ireo tatitra momba ny bibikely mba hanalana ny olana rehetra amin'ny rafitra fiasana.
Vakio ihany koa: Ahoana ny famoronana kaonty Nintendo vaovao amin'ny Switch
Inona no azonao atao amin'ny safidy Android Developer
Ireto misy fiasa rafitra mahafinaritra maro hafa ao amin'ny Android Developer Options.
1. Fampiasana fitadidiana
Hijery ny salan'isa fampiasana fahatsiarovana an'ny rafitra Android sy ny fampiharana hafa. Azonao atao ny mampiasa ity fitaovana ity mba hijerena ireo fampiharana noana fitadidiana.
2. Serivisy mandeha
Tsy vitan'ny hoe mahita ny fitadidiana sy ny fampiasana CPU amin'ny fampiharana iray amin'io fotoana io ianao, fa azonao atao ihany koa ny manakana ny fampiharana eo.
3. Ahena ny sary mihetsika
Tweak Android malaza hampihenana ny sarimiaina amin'ny fitaovana Android anao, ka manatsara ny fahombiazan'ny fitaovana Android.
4. Tweaks mifandraika amin'ny lohahevitra
Manomboka amin'ny Android 10, azonao atao ny manova ny loko accent ary koa ny endriky ny kisary amin'ny firafitry ny developer.
Vakio ihany koa: Emulator Android tsara indrindra - Gameloop
Nahoana aho no tokony hamela ny safidy developer?
Ny safidy developer dia natao ho an'ny mpampiasa efa mandroso. Azonao atao ny mamela azy ireo raha te hanova ny fanovana mandroso amin'ny fitaovanao ianao.
Azo antoka ve ny fampandehanana ny maody developer?
Tsy azo antoka tanteraka ny manodinkodina ny safidin'ny mpamorona raha tsy fantatrao ny dikan'izy ireo.
Inona no mitranga rehefa avelanao ny safidy Developer amin'ny Android?
Ny fampandehanana ny maody mpandrindra dia manokatra ny firafitry ny fitaovana fanampiny izay mahasoa ho an'ny mpampiasa efa mandroso sy ny mpamorona.